नेपालमा अब कोरोना संक्रमण आगामी सातादेखि ओरालो लाग्दै जान्छ - Khabar Center
काठमाडौं । माघ महिनाको पहिलो सातायता नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण उच्च रह्यो । देस्रो साता आइपुग्दा यो संख्या स्थिर छ । माघको दोस्रो साता नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण उच्च भएर क्रमशः घट्दै जाने सरकारको आंकलन थियो । गत साताको तुलनामा पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक संक्रमणदर बढेको देखिँदैन । यो अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा अब कोभिड संक्रमण घट्दै गएको हो अथवा अझै उच्च हुन्छ ?
नेपालमा अहिले दैनिक ६ देखि १० हजारको हाराहारीमा नयाँ कोभिड–१९ संक्रमित थपिने गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको माघ १४ गतेको तथ्यांक अनुसार नेपालको टेष्ट पोजेटिभिटी दर ३४.३६ प्रतिशत छ । माघ ६ गते एकैदिन कोभिड संक्रमण अवधिकै सबैभन्दा धेरै १२ हजार ३३८ जना संक्रमित थपिएका थिए । माघ महिनाको १४ दिनमा नेपालमा १ लाख २३ हजार ३२० संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या १० लाख ६८ हजार ९३२ पुगेको छ । हाल सक्रिय संक्रमित ८९ हजार ९४१ रहेका छन् ।
आगामी सातादेखि संक्रमण ओरालो लाग्दै जान्छ
नेपालमा पछिल्लो साता देखिएको कोभिड–१९ को संक्रमणलाई तेस्रो लहरको उच्च बिन्दुको रुपमा विज्ञहरुले व्याख्या गरेका छन् । अहिलेको लहरमा नै संक्रमितको संख्या यो भन्दा उच्च हुने सम्भावना नरहेको उनीहरुको आंकलन छ । “यो साता नेपालमा कोभिड संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्यो अब क्रमशः ओरालो लाग्दै जान्छ । आगामी सातादेखि संक्रमण ओरोलो लाग्दै जान्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या केही बढ्नसक्छ । तर, अहिलेजस्तो उच्च भने हुँदैन,” इपिडिमियोलोजिष्ट डा. विराज कर्माचार्य भन्छन् ।
यो लहरमा फेरी संक्रमण उच्च हुँदैन
कोभिड–१९ को पछिल्लो भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण निम्तिएको तेस्रो लहरको संक्रमण अब मत्थर हुने चरणमा रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल यही साता उच्च भएर संक्रमण घट्दै जाने र अब फेरी पहिलेकै रुपमा बढेर नजाने बताउँछन् ।
“अबका केही दिन संक्रमण स्थिर हुनसक्छ र पुनः पहिलेको जस्तो ¥यापिड्लिी बढेर जाने देखिँदैन,” डा. पौडेलले भने । यो लहरमा अब कोभिड–१९ को संक्रमण अहिलेकोभन्दा बढेर नजाने आंकलन छ वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनको पनि । अस्पतालमा देखिएको संक्रमितको संख्या र काठमाडौंको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा संक्रमितको संख्या उच्च नहुने देखिएको डा. पुन बताउँछन् । आगामी सातादेखि नै संक्रमण घट्दै जाने निम्न आधारहरु रहेको डा. पुनको भनाइ छ ।
अस्पतालमा कोभिड संक्रमितको चाप कम हुँदै जानु, समुदायमा अधिकांशमा संक्रमण भइसक्नु र अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा नै रहेर निको हुनुले नेपालमा यो लहरमा अब कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च हुने सम्भावना कम रहेको डा. पुनको दाबी छ ।
अस्पताल भर्ना हुने र मृतकको संख्या भने बढ्न सक्छ
नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या कम हुँदै गए पनि अस्पताल भर्ना हुने र संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने केही सातासम्म बढ्नसक्ने विज्ञहरुको आंकलन छ । “संक्रमणको वेगअनुसार संक्रमण उच्च भएपछि क्रमशः ओरालो लाग्दै जान्छ । परीक्षण कम भए पनि नेपालमा समुदायस्तरमा व्यापक संक्रमण फैलिएको हामीले देखिरहेकै छौं । यस हिसाबले पुनः संक्रमण एक्कासी बढ्ने सम्भावना त हुँदैन । तर, अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु हुनेको संख्या भने केही साता बढ्ने नै देखिन्छ,” सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुबेदी भन्छन् ।
“सिकिस्त संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएको १० देखि १४ दिनलाई ब्ल्याक पिरियड कै रुपमा लिइन्छ । यो अवस्थामा बिरामीको ज्यान जे पनि हुनसक्छ । त्यसैले संक्रमण घट्दै गएको केही सातासम्म पनि मृत्यु हुनेको संख्या भने बढ्नसक्ने देखिन्छ”, संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइरालाको तर्क छ ।
प्रकाशित मिति :माघ १४ २०७८ शुक्रवार - १७:०६:५० बजे